Ogaden News Agency (ONA) – Joka oo ku qabatay East London shir aad u balaadhan oo arima muhiim ah lagaga hadlay
Joka oo ku qabatay East London shir aad u balaadhan oo arima muhiim ah lagaga hadlay
Waxaa magaalada East London ee gobolka Eastern Cape ee wadanka Koonfur Afrika lagu qabtay shir aad u wayn oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen faraca Jaaliyada Ogaadeeniya Ee Koonfur Afrika Ku leedahay deegaankaas iyo Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya ee OYSU.
Xalfadan ayaa lagu furay aayaadka Qur-aanka Kariimka ah waxaana Akhriyay Fadiilatu Xaafid Sh Cabdirizaaq kadibna waxaa lagu soo dhaweeyay Fadiilatu Sh Yuusuf Guure oo siwaafi ah ugu hadlay xaqnimada Jihaadka kasocda Ogaadeeniya isagoo dhalinyarada Soomaalida Ogaadeeniya iyo Walaalaha Soomaaliyeedba ku booriiyay in laga qayb qaato Jihaadka ay ku jirto Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya. Sheekha oo ku dheeraaday cadaynta xaqnimada Jihaadka ayaa ka digay in laraaco dadka shaatiga culimada qaba ee gaalada u iishay waxaana kamid ahaa hadalkiisii ugu danbeeyay in maanta Gumaysigu ku hadhay Umada Soomaalida Ogaadeeniya iyo Umada Reer Falastiin balse ayna marnaba is dhiibaynin. Waad ku aragtaan Reer Gaza ee maxaa keenaya in anagu aan isdhiibno ? ma geeridaan kacararaynaa?
Shirkan oo ahaa mid aad u wayn ayaa waxaa warbixin dheer ka soo jeediyay N/hure Cabdulaahi Sooc oo kusugan Gudaha Ogaadeeniya wuxuuna ka warbixiyay marxalada uu maanta marayo Halganku iyo awooda Ciidanka Xoraynta Ogaadeeniya. Waxaa sidoo kale warbixin dheer kasoo jeediyay shirka oo ku saabsasanaa taariikh halgameedka Ogaadeeniya iyo dhibaatooyinka ay Ethiopia ka gaystay wadanka Ogaadeeniya Mudane Cabdi oo ka socday ururka OYSU isagoo qudbadiisa ku bixiyay luuqada English ka.
Waxaa sidoo kale Qudbad lagu diirasay kasoo jeediyay shirka Mudane Paster Kalani oo ah Afhayeenka Jaaliyadda Ogaadeeniya oo u dhashay wadanka Koonfur Afrika wuxuuna sheegay in Halganka Ogaadeeniya siwayn looga garab taagan yahay wadankan isla markaana aan la aqbali doonin wax Gumaysi ah, gaar ahaan Afrikaan in uu Afrikaan Gumaysto.
Shirkan oo ahaa mid aanan lasoo koobi karin wacdarihii kadhacay goobtaas ayaa waxaa isna warbixin ka jeediyay Mudane Sh Xamdi Daahir oo kamid ah Golaha Dhexe Ee JWXO. Wuxuuna masuulku si waafi ah u amaanay Bulshada Soomaalida Ogaadeeniya ee mudada dheer Halganka Hiil iyo Hooba lagarab taagnaa. Wuxuu sheekhu daaha ka qaaday Hadafka JWXO ay u taagan tahay oo ah Xornimo gaadhsiinta dadka Soomaalida Ogaadeeniya marnaba in aysan ka dalfanaynin doonista xornimadooda intay Gabadhi kanooshahay.
Waxaa sidoo kale ka hadlay odayaal dhaqameed iyo culamaa,u diin dhamaantood sheegay in si xaq ah loo garab istaago Halganka kasocda Ogaadeeniya. Mudane Daahir carte ayaa dhaliil u soo jeediyay dadka ku nool qurbaha oo ku macneeyay hadii dadaalkeenu gaadhi lahaa sida dadka gudaha jooga in mar hore aan isbadal keeni lahayn. Sidoo kalle Sh Maxamed Nadiir ayaa isna ku dhawaaqay in Jihaadka ONLF waajib ku yahay cid kasta oo u dhalatay wadankaas iyo walaala dariska ahba .
Gabagabdii waxaa jirka hadalo kulul oo gubaabo ah kasoo jeediyay Halgame Cabdiraxmaan Fanax oo suugaan Halagameed ka jeediyay taas oo badashay dareenkii dadka shirkan ayaa kusoo dhamaadya guul iyo halgan mid ah oo lagu balamay isla markaan awaxaa lagu soo xidhay Duco Alle lagu waydiistay in uu Xoriyad dag dag ah gaadhsiiyo Umada Soomaalida Ogaadeeniya Walaalaha Soomaaliyeedna Dawlad cadaalad ah siiyo.